News of HEXAGON 2019 - Geofumadas
News of HEXAGON 2019
Juunyo, 2019 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, tabo cusub
Hexagon ayaa ku dhawaaqday teknooloojiyada cusub waxayna aqoonsatay casriyeynta isticmaalayaasheeda ee HxGN LIVE 2019, shirkeeda caalamiga ah ee xalalka digital. Kulankan xallinta ah ee lagu xalliyey Hexagon AB, oo leh meel xiiso leh oo ka mid ah dareemayaasha, software iyo teknooloojiyada madaxbannaan, waxay abaabuleen shir-tiknoolajiyad afar-maalmood ah oo lagu qabtay Venetian ee Las Vegas, Nevada, USA. UU HxGN LIVE halkaas oo uu kumanaan ka mid ah macaamiisha Hexagon, la-hawlgalayaal iyo khabiiro teknoloji ah oo ka kala yimid adduunka.
Munaasabadda ayaa bilowday soo bandhigid cajiib ah Ola Rollén, Madaxweynaha iyo Maamulaha Hexagon, oo cinwaankiisu yahay "Xogtaada ayaa badbaadin karta adduunka."
"Hexagon wuxuu leeyahay aragti xoogan oo ku saabsan in xogta la hawl galiyo oo dib loo dhigo isbeddelka kaydinta ilihii iyo nidaamyadii Dhulkaba," ayuu yidhi Rollén. «Awood siinta mustaqbal is-xukun, sii wadida" wanaag inaan wanaag u ficno "waxay u horseedi doontaa jiritaanka sii kordhinta tayada, nabadgelyada, wax soo saarka la wanaajiyey iyo qashin yar, isla natiijooyinka ganacsi ee macaamiisheenna. raadin ».
Hoggaamiyeyaasha Hexagon ee xarumaha ganacsiga ayaa ku dhawaaqay badeecooyin tiknooloji cusub iyo ururo warshad intii lagu jiray bandhigyada ugu muhiimsan ee Arbacada 12 Arbacadii. Inta lagu guda jiro dhacdo, ku guuleysatay abaalmarinta sannadkan, ilaa tusay ruuxa hal-abuurnimo, iskaashi iyo horumarka farsamada loo marayo saamaynta on ganacsigooda, warshado ay u adeegaan iyo bulshooyinka degaanka iyo mid caalami ah.
Munaasabaddan waa la sharfay iyo xaqnimadooda:
Apex.AI: Ballaarinta tiknoolajiyada gaari-wadida autonomy. Si looga faa'iideysto suuqyada toosan, sida dhismaha, wax soo saarka iyo waxyaabo kale oo badan.
Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC): Waxay ka shaqeeyaan sidii ay u abuuri lahaayeen nidaam tayo sare leh ee soo saarista baabuurta.
Bombardier Aerospace: Hirgelinta farsamooyinka farsamooyinka ah ee farsamada, kaas oo ansixinaya qaybaha iyada oo loo marayo aagagga muhiimka ah ee la raacayo
Khayraadka Dabiiciga ah ee Kanada: Mashaariicda lagu taageerayo tayada nolosha iyo caafimaadka dhaqaalaha magaalooyinka aan ka shaqeyno
Censeo: Isticmaal georadar si aad u sameyso hababka kormeerka yar
Corbins Electric: Abuuri oo wadaagaan dhaqamada ugu fiican, ee ma aha oo kaliya shirkadda, laakiin waaxda oo dhan
Adeegga Bilayska ee CP: Waxay u damaanad qaadaan mid ka mid ah tareenada ugu nabadgelyada leh ee leh qaabka ugu wanaagsan ee Waqooyiga Ameerika.
Iskuday: U samee xalka si aad u sameyso macluumaadka akhbaarta leh ee laga helo ururada oo idil
Fresnillo: Waxay abuuraan wax-qabadyo farsamo oo isku-dhafan oo loogu talagalay qorshaynta maaraynta, hawlaha, ganacsiga, baahiyaha sahanka iyo dabagalka.
“Macaamiisheenu waa wakiilo isbeddela iyo xoolalayaal xoog badan, waana ku faraxsanahay inaan u dabaaldegno sannadkan sharafta ay ka qaateen tabarucaadda hal-abuurka ah,” ayuu yiri Rollén. Sheekooyinkooda ayaa nagu dhiirrigeliya oo nagu dhiirrigeliya dhammaan Hexagon.
FTI ayaa ku dhawaaqday in la bilaabi doono Foomka Xingmirka 2019 1
Technologies la xirrira (FTI), xal warshadaha keentay for design, matalaada, qorshaynta iyo aad ujecel of sheet qaybaha biraha sameeysa, ayaa ku dhawaaqay furitaanka dunida oo dhan ee FormingSuite 2019 1 Pack Feature. Loogu talagalay estimators kharashka, injineerada design, samaynta qalab iyo injineero Sare qorsheyneysa ee, aerospace, badeecooyinka baabuurta iyo qalabka korontada, pack habkaani leeyahay hagaajinta badan oo hubiyo tayada ugu fiican ee natiijooyinka iyo qaab loogu talagalay oo dhan dadka isticmaala.
isbedel guud ee workbenches iyo geedi socodka software ogolaan fikradaha wax ka faa'idaysiga (MUL) iyo design for manufacturability (DFM) si buuxda loo ogaaday. Fikradahaas waxay ka caawiyaan macaamiisha inay yareeyaan qashinka khatarta ah iyada oo loo marayo tijaabooyin wanaajiya oo badalaya shaandhada tijaabada ah iyo xallinta masalooyinka iswaafajinta, taas oo halis gelin karta sharafta gabal dheer ka hor inta aysan gabalku gaarin geedka. Nidaamka cusub ee faaruqin ee barnaamijka ay u oggolaadaan dhinacyadu inay buulka ka dhistaan ​​oo ay abuuraan si deg deg ah, iyo qashin badan oo ka horeysa, marka ay tixgelinayaan arrimo badan oo ka mid ah habka shaabadeynta. Isbedelada godadka tijaabada ah iyo dabeecadaha laf-dhabarku waxay isku-dhex-dhexaadiyaan xalalka dhabta ah ee dunidu, taas oo u oggolaanaysa qaddar qoto-dheer iyo qaybo xoog leh iyo hawlo.
Iyada oo qaabkan ugu dambeeya, habka ProcessPlanner ee FormingSuite wuxuu sii wadaa inuu ku kordhiyo taageerada geeddi-socodka ugu habboon ee samaynta biraha xaashida. Isboortiga Qorshaha Khadka Lahaanshaha Hadda waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay faahfaahin ka bixiyaan nidaamka tirtiridda ee hawlgallo badan (online iyo offline). Awoodgan cusub wuxuu hagaajinayaa sharraxa muuqaalka ee habka xakamaynta, iyo sidoo kale culeyska matrixka, kharashka sawirka, cabbirka miisaanka iyo xisaabinta miisaanka sawirka. Doorashooyinka cusub ee lagu xisaabinayo kharashka kamaradu waxay kordhinaysaa dabacsanaanta, waxay bixisaa qiyaaso sax ah oo loogu talagalay boodhyada loo habeeyay, iyo heerka istaandarada horumarineed iyo imtixaanka xariiqa. Isbedelka isbedelka miisaan-shaqeedkan, ikhtiyaar cusub oo muuqaal ah oo muujinaya shaashadda habka "ProgDie" ayaa muujinaya cabbirka dhimashada iyo habka qaabeynta.
Qalabka COSTOPTIMIZER wuxuu hadda soo bandhigayaa horumar wax ku ool ah oo ku saabsan xawaaraha qiyaasta cakiran, iyo sidoo kale labo ikhtiyaar oo cusub si loo muujiyo xaaladda xajiyaha iyo qaybta 3D oo ay weheliso naqshadeynta. Naqshadeynta kharashka naqshadaynta qashinka hadda waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay kala doortaan in qaybta la jarjaro inta lagu hayo magdhawga lifaaqa, ama haddii lifaaq la gooyo iyada oo aan saameyn ku yeelan qaybta. Isbeddelkan, wuxuu siiyaa dadka isticmaala qalab lagama maarmaanka u ah si ay si wax ku ool ah u qiimeeyaan fursadaha kharashka yar ee qalabka ku jira qaybaha la sameeyay ee ku yaalla lifaaqan. Kordhinta awooda gaarka ah ee FormingSuite si loo soo bandhigo loona qiimeeyo joomatarka shabakadda iyo taageerada; Qalabka godka daloolka ayaa hadda bixiya ikhtiyaarka ah in lagu daro agab agagaarka godadka tijaabada ah, sida caadiga ah ee naqshadaynta jilicsan ee dhabta ah. Tani waxay u oggolaaneysaa injineerada in ay hubiyaan in ay si daacadnimo ah uugu sharxaan naqshadahooda software-ka iyo aqoon-is-weydaarsiga.
Ugu dambeyntii, casriyeynta muhiimka ah ayaa la sameeyey si loo yareeyo Dhaqdhaqaaqa Fast. Muuqaalka tooska ah ee mishiinka inta lagu jiro haraagaagu wuxuu hubiyaa in natiijooyinka hirgelinta ay sax yihiin. Qalabka rikoodhada ah ayaa hadda bixiya xalal fara badan iyo natiijooyin badan oo sax ah.
Michael Gallagher, madaxa fulinta iyo Madaxweynaha FTI wuxuu yidhi "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu ku dhawaaqo sii deynteenna ugu dambaysay ee HxGN LIVE 2019. "Mid ka mid ah mabaadi'da ugu weyn ee barnaamijyadeenna ayaa ah in aan sare u qaadno adeegsiga qalabka, taas oo aan u badbaadinaynin macaamiisheena kaliya malaayiin doollar, laakiin sidoo kale waxay u isticmaashaa xog si loo yareeyo qashinka loona sameeyo howsha xiridda mid sii waara."
Foomka Xingmarka 2019 1 XNUMX hadda waa la heli karaa macaamiisha laga helo bogga FTI Forming.com.
Aspen Technology iyo Hexagon waxay ku dhawaaqeysaa wada shaqeyn cusub si loo xoojiyo isbedelka digital ee nidaamka warshadaha
Shirkadaha waxay dardar-galin karaan kala-guurka ka soo baxa dokumenti-ku-saleysan shaqada dijitaalka ah, hagaajinta wax-soo-saarka iyo tayada natiijooyinka inta lagu jiro wareegga nolosha.
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), ayna hantida shirkada software ah, iyo lixgeesle dhawaaqay heer cusub oo iskaashi ku salaysan Memorandum of Understanding (MoU) si dhow waafajiyaan xal kharash ku qiimaysay, injineernimada aasaasiga ah iyo fikradda AspenTech oo la socota qalabka injineernimada ee Hexagon PPM, si ay u suurtageliso shaqadiisu in ay si buuxda xogta u tahay dhammaan wareegyada nolosha ee hantida.
AspenTech iyo lixgeesle PPM midoobaan sidii ugu horeeyay ee suuq-socodka design ah iyo injineernimada si buuxda digital qiimaynta dhaqaale isku dhafan si loo caawiyo macaamiisha si fiican loo maareeyo khataraha dhaqaale ee mashaariicda adag, taas oo caqabad weyn maanta. The awoodaha isku daro dardar-Qaadi Karaa Isbadal digital iyo awood hirgelinta xalka ugu fiican ee isku dhafan laba bixiyeyaasha software hoggaamineed.
Shaqaynta wada, AspenTech iyo lixgeesle PPM siin kara oo mataano ah oo dheeraad ah oo buuxda digital, oo ay ku jiraan kaabayaasha dhirta iyo hababka kiimikada dhaca gudahood kaabayaasha in jirka labada, si loogu ogolaado ka shaqeeya si ay u sameeyaan go'aano fiican in loo kordhiyo waxqabadka, tayada iyo waqtiga firfircoonida. qorshaynta Software, barnaamijyada iyo isku halaynta of AspenTech, oo ay weheliso waayo aragnimo ah ee lixgeesle PPM for wajiga of design injineernimada faahfaahsan goobaha iyo dhirta, kaa caawin doona ka shaqeeya in ka badan si fudud u taabo daydo injineernimada inta lagu jiro hawlgallada, loo kordhiyo Ku soo noqoshada maalgashadeeda oo u oggolow inay si wanaagsan uga jawaabaan xaaladaha suuqa.
Digniintan ayaa timid intii ay socotay hadalkii furitaanka ee gudoomiyaha Hexagon PPM, Mattias Stenberg HxGN LIVE 2019 ee Las Vegas, Hexagon shirkii sanaadiiqda sanadka, halkaas oo Antonio Pietri, madax iyo Agaasimaha Aspen Technology uu ku biiray marxaladda.
Pietri wuxuu yidhi: “Wada shaqeyntaani waxay u oggolaanaysaa macaamiisha dabacsanaanta inay doortaan xalalka ka imanaya suuq-keenayaasha inta lagu jiro wareegga nolosha, laga bilaabo marxaladda naqshadeynta ilaa nidaamyada ka shaqeeya iyo dayactirka geedka. Shirkadaha injineerinka, wax soo iibsiga iyo dhismaha (EPC) iyo howl wadeenada iska leh ayaa awood u yeelan doona inay dardar geliyaan isbeddelka dhijitaalka ah iyaga oo leh kalsooni buuxda, kuna taageeraya xalka ugu fiican fasalkooda. "
Stenberg wuxuu yiri: «Iyada oo ku saleysan qiimeynteena iyo ballanqaadkeena macaamiisha wadajirka ah, waxaan kalsooni ku qabnaa inay jirto suurtagal in saameyn lagu yeesho hawlgallada iyo hufnaanta mashruuca. Isku-darka kharashaadka mashruuca go'aamada bilowga hanaanka qaabeynta waxay yareynaysaa miisaaniyadda iyo halista barnaamijka. "Mashruuca ka dib, isku-darka dayactirka saadaasha iyo kontaroolada horumarsan ee xalkayaga maaraynta macluumaadka waxaan u tarjumaynaa geedo tayo sare leh oo sifiican noloshooda u gudan doona."
Macaamiisha ayaa hore u taageeraya hindisahan cusub:
Artni Bellezza, oo ah maamulaha injineerinka Eni ayaa yidhi "Eni waxay sugeysaa dadaallo la mid ah kan u dhexeeya Hexagon PPM iyo AspenTech," ayuu yiri Arturo Bellezza, maamulaha injineerinka Eni. «Isku-dhafka tooska ah ee ka dhaxaysa jilitaanka qaabsocodka, qaabka 3D iyo hawlgallada ayaa u oggolaanaya hormar ballaaran oo ku saabsan safarka dhijitaalka ah ee warshadeena '.
Hexagon waxay soo saartey miisaaniyada Onxall HxGN si loo casriyeeyo kormeerka amniga dadweynaha iyo waxqabadka
Hexagon ayaa bilaabay HxGN OnCall, xirmo amniga guud ee casriga ah oo ka faa'iideysanaya falanqaynta xogta waqtiga-dhabta ah si loo wanaajiyo wacyigelinta hawlgalka, kordhinta waxtarka iyo hagaajinta khayraadka.
OnCall HxGN faylalka ka kooban yahay afar qaybood oo alaabooyinka la soo wada ama madax banaan geeyay kartaa: Office, Falanqaynta, iyo Qorshaynta iyo Response Records. Si wadajir ah, faylalka tacliimeed ee bixisaa il keliya oo run in ay oggolaadaan in jawaab dhakhso ah iyo in la hubiyo magaalo ammaan ah. HxGN OnCall waa faylalka kaliya dhamaystiran oo ammaanka guud abuuray oo leh khibrad domain dhammaan heerarka adeegyada gurmadka iyo applicability qiyaasta: booliiska, dab, EMS, ilaalinta rayidka, wadayaasha kaabayaasha waaweyn, xuduudaha iyo caadooyinka, gargaarka wadada iyo in ka badan.
"Hexagon waxay qaabeyneysaa mustaqbalka amniga guud iyada oo u oggolaanaysa hay'adaha in ay noqdaan kuwa ka sii dhib badan kana jawaabaya," ayuu yiri. Ola Rollén, Madaxweynaha iyo Maamulaha Hexagon. "HxGN OnCall waxay adeegsanaysaa xogta si loo bixiyo isku xirnaanta, wada shaqeynta iyo sirdoonka si loo helo magaalo nabad iyo magaalooyin adkeysi leh."
Awoodda lagu hirgelinayo xarumaha iyo dariiqa dhexdooda, waxay u oggolaaneysaa hey'addaha dhammaan qiyaasta in ay si fiican uga dhex muuqdaan dhacdooyinka, wanaajiyaan natiijooyinka iyo yareynta khatarta. Dhisidda ku dhowaad sodon sanno oo khibrad dhinaca ganacsiga ah, HxGN OnCall waxay ku jirtaa IoT, dhaqdhaqaaqa, falanqaynta iyo dariiqa si loo helo jiilka xiga ee xalka nabadgelyada dadweynaha ee hay'adaha caalamka. awoodaha ay oggolaadaan xogta soo socda ka baxsan telefoon, oo ay ku jiraan SMS, fariimaha deg dega iyo video, hubinta in Muwaadiniinta gaadho maamulka ka taliya deegaannadooda si ay u bixiyaan macluumaad badbaadin doona noloshooda oo dhan khadaka warisgaarsiinta ee la heli karo.
Qeybta geospatial ee Hexagon wuxuu bilaabay Luciad V2019
Qaybta Hexagon Geospatial Division waxay soo saartay Luciad V2019 oo ku saabsan HxGN LIVE 2019, shirka xalinta digitalka ee Hexagon.
Iyada oo ay la socoto miisaaniyada Luciad, Hexagon waxay bixisaa mashaariic heer gobol ah oo aqoon u leh xaaladda iyo goobaha caqliga ah waqtiga dhabta ah. Daah Luciad in 2019 looga golleeyahay in lagu dumin Fididda xogta si ay uga caawiyaan ururada, magaalooyinka iyo dalalka si wanaagsan u fahmaan xidhiidhada in la wado dunida casriga ah iyo saamayn isbedel ka dhaca ku wareegsan.
"Luciad V2019 wuxuu u oggolaanayaa ururada caqliga leh, goobaha, magaalooyinka iyo quruumaha, inay ka faa'iidaystaan ​​xalalka goynta sida meesha caqliga leh, iyo abuurista isku xirnaanta lama huraanka ah si loo wado go'aan-qaadashada waqtiga-dhabta ah," ayuu yidhi Mladen Stojic, Madaxweynaha Qaybta Geospatial kana yimid Hexagon. “Suuq noocan oo kale ah, oo ku yaal isgoyska geospatial, shuruudaha howlgalka iyo aragtida, ayaa muhiim u ah ururada caalamiga ah ee maareeya daadadka xogta dareemayaasha IoT, oo ay tahay in si muuqata loo arko si kor loogu qaado waxqabadka iyo guusha hawlgalka. howlgalka ».
Iyada oo taageero toos ah loogu talagalay JavaFX, horey loo casriyeeyay ee LuciadLightspeed, waxay u oggolaaneysaa inay abuuraan dhexdhexaadinta firfircooni user, iyada oo ka faa'iideysanaysa awoodda GPU awood buuxda leh. LuciadLightspeed iyo LuciadFusion labaduba waxay ku habboon yihiin OpenJDK, iyo sidoo kale mashiinada ugu dambeeyay Oracle Java. Isticmaalayaasha waxay ku kobcin karaan adeegyada macluumaadka qoraalka ah ee la adeegsan karo API ee RRI-ka ah oo rograad ah oo ku jira bogga loo yaqaano server-ka LuciadFusion ama waxay horumarinayaan nidaamkooda gaarka ah ee LuciadFusion Studio si loo helo maareynta xogta sahlan oo isaashi leh.
Version Luciad V2019 kale oo ay bixisaa Tilmaamo updated ah mobile iyo daalacashada labada LuciadMobile in LuciadRIA in la jaanqaadaan baahida ugu dambeeyay ee difaaca iyo duulista, ka askari ratigii qorshaynta hawada daruurta, iyo heerarka cusub sida MS2525, MGCP iyo AIXM. Taas ayaa ka dhigaysa Luciad faylalka tacliimeed ee wax soo saarka oo kaliya in industry ee bixiya taageero ah symbology joogta ah oo dhan badeecada.
Diyaarinta waxaa sidoo kale ku jiri doona badeecooyin cusub oo loo yaqaan LuciadCPillar, taas oo ah jawaabta Hexagon ee ku saabsan baahida sii kordhaysa ee udub dhexaad u ah howlgalka shaqo ee C ++ / C #.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Luciad V2019, booqo https://www.hexagongeospatial.com/products/luciad-portfolio
Hexagon qaybta geospatial ee Hexagon soo bandhigaysaa Macaamiisha Macmiilka 2019
Qeybta Geospatial ee Hexagon, ayaa bilaabay M.App Enterprise 2019 ee HxGN LIVE 2019, shirka xalinta digital-ka ee Hexagon. Nidaamkaan ugu dambeeyay ee Macaamiisha M.App, wuxuu isku xiraa awoodda Hexagon's Portfolio ee Hexagon si loo wanaajiyo muuqaalka, falanqaynta iyo maamulka xogta.
Fiican ee hantida la socodka, u qiimeeyaan isbedel oo ay qaadaan talaabo madal M.App Enterprise waa xal gaar ah oo awood hay'adaha in ay Smart lixgeesle M.Apps ka hadlaysa dhibaatooyinka ganacsiga ay dynamically ku salaysan goobta. Tilmaamo New of M.App Enterprise 2019 ka dhigaan aasaaskii dadka isticmaala in ay la kulmaan 5D a smart digital xaqiiqada, halkaas oo xogta ku xiran yihiin si habsami leh iyada oo loo marayo wada dunida jirka la digital iyo sirdoonka waxaa daro geedi socodka oo dhan .
"Ganacsiga la hagaajiyay ee M.App wuxuu hadda la shaqeeyaa tikniyoolajiyadeena Luciad, taas oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay lahaadaan waxa ugu wanaagsan ee labada adduun, marka ay timaaddo aragtida xogta sare iyo lafa-gurista si ay ula xiriiraan macluumaadka si adag iyo waqtiga dhabta ah," ayuu yiri Georg. Xammeer Agaasimaha Teknolojiyada - Codsiyada qeybta heesaha 'Hexagon geospatial'. "Nidaamkan ganacsi ee mideysan ayaa hadda u oggolaanaya dadka isticmaala iyo shuraakada inay u abuuraan xalal toos ah suuqyadooda iyo qaybaha warshadaha."
Isdhexgalka Bandhigga Luciad wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay isku xiraan, sawiraan oo baadhaan xogta iyo xogta rikoodhada ah ee Smart Imtixaanka Mashruuca 3D. Hadda waxay sidoo kale soo bandhigaysaa sifooyinka dhulbeereedka habka dhabta ah, oo ku salaysan xogta sarraysa ee aagga. Si loo daboolo degaannada waaweyn ee degaanka oo leh qaraar sare, Macmiilka M.App 2019 wuxuu u oggol yahay dadka isticmaala inay ku xidhmaan masruufka masruufka ee ay bixiso LuciadFusion. Intaa waxaa dheer, kordhinta algorithms ee interface interface Spatial Enterprise u saamaxaya Enterprise M.App in ay fuliyaan ogaanshaha qalabka fog ee leh barashada mashiinka -Machine Learning.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Macaamiisha M.App, booqo https://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp/mappenterprise.
Hexagon waxay soo saartaa xalka si loo ogaado daalka iyo mashquulinta wadayaasha gaadiidka fudud
Hexagon AB, ayaa soo bandhigtay HxGN MineProtect Operator Nidaamka Digniinta Nidaamka Nalalka (OAS-LV), daal la ogaanayo iyo qeybta wax lagu ogaanayo, taas oo si joogto ah u kontorooli doonta feejignaanta shaqaaleeyaha gudaha kamaradaha baabuurta fudud, basaska iyo semi-gawaarida.
OAS-LV lixgeesle ballaarinaya faylalka tacliimeed ee xal ammaanka ka shaqeeya, buuxinayana daldaloollo ah si ay u ilaaliyaan wadayaasha gaadiidka iftiin, fogaado ay hurdaan marka ay giraangirta, isku leeyihiin ama daal ama Wareersan dhacdooyinka kale ee la xiriira. wax soo saarka wuxuu ku salaysan yahay technology isticmaalaa in ka HxGN MineProtect Operator Nidaamka Dareemidda Nidaamka Dareemaha (OAS-HV) - Nidaamka Digniinta Cawaaqibka, taas oo ilaalisa wadayaasha gaadiidka xamuulka.
"Daalka firfircoonaanta iyo mashquulinta waxay ku soo noqnoqdaan khataraha ka imanaya howlaha ay ka mid yihiin macdan qodista iyo warshadaha kale," ayuu yiri Ola Rollén, madaxweynaha iyo madaxa shirkadda Hexagon. "OAS-LV waa qayb qiimo leh oo dheeri ah oo ku jirta suuq-keenayada amaanka ee horseed u ah MineProtect iyo caddeyn dheeri ah oo ah in Hexagon, sida macaamiisheeda, ay si dhab ah amniga u qaataan."
Qalabka sahlan ee lagu rakibo qalabka ayaa ku baari kara wejiga taleefanka si loo ogaado calaamadaha daalka ama mashquulinta, sida mikrosleep. Algorithm-ga tooska ah ee waxbarashada -barashada mashiinka, waxay ka faa'iidaystaan ​​xogta farsamooyinka wajiga ah ee falanqaynta si ay u go'aamiyaan haddii feejignaan la dhaqaajiyo ama aan. OAS-LV waxay ku shaqeysaa xaalado khafiif ah oo mug leh, iyo iyada oo loo marayo muraayadaha qalanjabinta iyo / ama muraayadaha indhaha.
Qalabka cabirka ee marwalba waa la isku xiran yahay, iyo xogta baabuurta waxaa loo gudbin karaa daruuraha ama xarun gaar ah. Tani waxay u oggolaaneysaa helitaanka ogeysiisyada waqtiga dhabta ah, si ay kormeerayaasha iyo kantaroolayaasha u codsan karaan habka dhexdhexaadinta oo u oggolaanaya falanqayn dheeraad ah oo farsamo. OAS-LV waa mid ka mid ah talaabooyinka cusub ee la soo bandhigay todobaadkan HxGN LIVE 2019, Hexagon oo ah shir sannadeedka farsamada sanadka.
Hexagon waxay isku baddaleysaa helitaanka adeegyada dhulka hoostiisa iyadoo la adeegsanayo xal cusub oo radar ah oo lagu dhex galo dhulka
Lixgeesle AB bandhigay Leica DSX, xal radar qaadi karo wax lays dhulka ah (GPR) ee lagu ogaan karo korontada dhulka hoostiisa. Naqshadaynta fududaynta xogta iyo baabuuridda waxqabadka xogta, DSX waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si sahlan u ogaadaan, khariidadda u muujiyaan adeegyada korontada ee si ammaan ah iyo kalsooni leh saxnaanta ugu sareysa.
"Waxaan u qorsheynay Leica DSX dadka isticmaala aqoonta yar ee GPR ee u baahan inay helaan, ka fogaadaan ama khariidadda adeegyada guud ee dhulka u dhigaan hab fudud, dhakhso leh oo la isku halleyn karo," ayuu yiri Ola Rollén, madaxweynaha iyo madaxa shirkadda Hexagon. "Iyada oo la adeegsanayo xalka adeegsiga, Hexagon wuxuu keenayaa tikniyoolajiyadda GPR qaybo cusub oo adeegsade ah si loogu oggolaado hawlgallo badbaado leh shaqo kasta oo u baahan qodista."
Muuqaal qeexaya DSX waa barnaamijkiisa, DXplore, taas oo tarjumeysa calaamadaha isku xidhan ee natiijooyinka sahlan iyo kuwa sahlan. Si ka duwan noocyada kale ee GPR, dadka isticmaala uma baahna inay waayo-aragnimo u yeeshaan tarjumaadda xogta radiyaha iyo hyperbolas. DXplore wuxuu adeegsadaa algorithm caqli ah si uu u abuuro khariidadaha adeega digital-ka ah daqiiqado, oo muujinaya natiijooyinka la ogaaday iyada oo dadka isticmaala ay wali ku jiraan goobta. Khariidada ayaa sidoo kale loo dhoofin karaa Leica DX Mapping Khariidadda, Leica ConX ama barnaamij kale oo waxtar ah ka dib markii loo isticmaalo mashiinada, ama in la rogo macluumaad dheeraad ah.
Hexagon waxay sii ballaarineysaa taxanaha Leica BLK, isbaddelinta qabashada dhabta ah ee kaabayaasha, codsiyada amniga iyo dhaqdhaqaaqa
Hexagon AB waxay soo bandhigtay labo daro oo cusub oo lagu daray taxanaha Leica BLK. The Leica BLK2GO waa midka ugu yar iyo kan ugu caansan scanned scanner image ee warshadaha, iyo Leica BLK247 Xogta ugu horeysa ee laser-ka sameynta laser-ka ee ilaalinta amniga oo si joogto ah u siinaya saacadaha 3 ee maalinta, 24 maalmood ee usbuuca.
"Kordhinta taxanaha BLK wuxuu sii wadaa Hexagon sannadihii 20 ee diiradda saaraya kacaan-ka-qaadista qabashada xaqiiqada," ayuu yiri Ola Rollén, madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee Hexagon. “Dareemayaashani kaliya uma cusbooneysiin karaan awoodooda farsamo, laakiin sidoo kale wax ku oolnimada. Leica BLK2GO waa la qaadi karaa meel kasta, iyo Leica BLK247 waligeed ma seexato «.
Leica BLK2GO waxay soo bandhigaysaa dhaqdhaqaaqa marnaba ka hor inta aan la eegin in lagu baaro agagaaraha gudaha ee adag. Xararad laser image scanner The isku daraa muuqaalaynta, LiDAR iyo teknoolajiyada Kombuyuutarada ku laayeen in iskaan 3D halka dhaqaaq, jidaynayey isticmaala in ay ka badan oo waliba dhiifoon oo hufan ee qabsaday walxaha iyo goobaha. BLK2GO waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah codsiyada, ka mashaariicda reuse qabsiga ee warshadaha ee naqshadaha iyo design, si sahaminta goobaha, eegidda iyo socodka shaqada VFX warbaahinta iyo madadaalada.
Leica BLK247 waxaa loogu talagalay inay si joogto ah u qabato dhabta ah 3D, ballaarinta awoodda codsiyada ammaanka. Dareenka ayaa siiya wacyi-galin ku saabsan xaaladda dhabta ah, iyada oo loo marayo computer-ka loo yaqaan "perimeter computing" iyo isbeddelka tiknoolijiyada lagu ogaanayo LiDAR. Isticmaalka sirdoonka macmal, BLK247 kala go'an iyo dhaqaaqin alaabta sida qofka socodka ah iyo baxo boorso, iyo aqoonsado khataraha ammaanka si ay u bixiyaan digniino-waqtiga dhabta ah isbedelada la filayo oo aan la filayn. BLK247 aad u hagaajinaysaa wacyiga xaaladeed meelaha ku egtahay ama ammaanka sare gudahood, baabi'inta baahida loo qabo in dadka ay si joogto ah ula socdaan derbiyada screens ammaanka ama darfaha gacanta dhismayaasha caaqil.
Qaybta geospatial ee Hexagon waxay ku darsataa mashruuca M.App iyo M.App X ee barnaamijka waxbarashada
Lixgeesle Geospatial Division xal M.App Enterprise iyo M.App X waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo barnaamijkeeda waxbarasho caalami ah oo ka 11 2019 June doonaa. Ku dariddani waxay siinaysaa ardayda fursad ay ku helaan horumarin iyo horumarinta codsiyada geospatial, taas oo siin doonta farsamo farsamo ee suuqa shaqo tartan.
"Maaddaama warshadaha geospatial ay u dhaqaaqeyso codsiyada ganacsiga ee ku saleysan daruuraha, waxaan u baahan nahay inaan ku qalabeysanno jaamacadaha qalab sax ah oo loogu diyaariyo ardayda mustaqbalka," ayuu yidhi Mike Lane, Maamulaha Waxbarashada Caalamiga ah ee Hexagon Geospatial Division «.
Macmiilka M.App iyo M.App X waxay u oggolaanayaan jaamacadaha inay ka faa'iidaystaan ​​tikniyoolajiyadda ganacsiga ee Hexagon si ay ardayda u barato sida loo isticmaalo xogta geospatial iyo xallinta dhibaatooyinka dhabta ah ee adduunka ”. M.App Enterprise waa madal maxalli ah oo loogu talagalay kaydinta iyo dejinta Hexagon Smart M.Apps: dalabyada caqli galka ah ee isku daraya waxa ka kooban, qulqulka shaqada iyo geoprocessing aragti is-dhexgal iyo dhaqdhaqaaq firfircoon leh..
M.App X waa xal dhiig-miirasho oo ku salaysan dariiqa, loogu talagalay in la abuuro alaab iyo warbixinno laga soo qaatay sawirro, oo lagu muujiyay meherad ganacsi.
"Abuuritaanka codsiyada caadiga ah ee Shirkadda M.App Enterprise, ardaydu waxay baran karaan sida loogu daro noocyada kala duwan ee xogta ku saleysan goobta iyo adkeynta awooda falanqaynta waqtiga-dhabta ah," Lane ayaa sidaas yidhi. “Adeegsiga M.App X, ardayda raadineysa shaqooyinka sirdoonka geospatial (GEOINT) iyo waaxyaha la xiriira waxay baran doonaan xirfadaha wacyigelinta xaalada adag waxayna heli doonaan aqoonta loo baahan yahay si loo abuuro, loo maareeyo loona gudbiyo xogta u saamaxeysa is dhexgalka, falanqaynta iyo isku duubnida Macluumaadka geospatial. . Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u soo bandhigno aaladahaas bulshada waxbarashadda «.
barnaamijka waxbarashada ku siin doonaa macallimiinta iyo ardayda tiro sii kordhaysa oo baarka tababarka, tusaalooyin, videos iyo dheeraad ah si ay u bartaan oo ay isticmaalaan inta la Enterprise iyo M.App M.App X. shaqeeya
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isku-xidhka Macaamilka M.App iyo M.App X ee manhajka juquraafiyadda iyo sirta goobta jaamacadda, booqo https://go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs.
Post Previous«Previous LandViewer - Hadda isbeddelada isbeddelka waxay ka shaqeeyaan shabakadda
Post Next #BIM - Koorso Gaarka ah ee Injineeriyada Dhismooyinka leh ETABSNext »